सामाजिक सञ्जालमा नअल्मलिँदा यस्ता १० परिवर्तन देखिन्छ, – Nilo Aakash
सामाजिक सञ्जालमा नअल्मलिँदा यस्ता १० परिवर्तन देखिन्छ,
निलो आकाश संवाददाता १० माघ २०७७, शनिबार १७:२५
सामाजिक सञ्जाल परिवार, साथीभाइ, आफन्त, नातागोता, सहयोगी र प्रेमी¬–प्रेमिकासँग निरन्तर सम्पर्कमा रहने एउटा छुट्याउनै नसकिने माध्यम बनिसकेको छ । तर, दुर्भाग्यवश पछिल्लो समयमा अधिकांश मानिसले सामाजिक सञ्जाललाई लाइक बढाउने टुल्स, फोटो र भावना सेयर गर्ने माध्यम र खाएको खानाको फोटो देखाउने भित्तोका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको छ । सामाजिक मिडियालाई यसरी असामाजिक बनाइँदा मानिसहरूले आफ्ना परिवार, पेसा रोजगारी र अन्य करिअर विकासमा गर्नैपर्ने काम भने छाडिरहेका छन् । यहाँ यस्ता १० परिवर्तका बारेमा चर्चा गरिएको छ जुन सामाजिक सञ्जालबाट बाहिरिएपछि मात्रै प्राप्त हुन्छ ।
तपार्इंको डिभाइसमा भएका सामाजिक सञ्जालका खाता लगआउट गरेर जुन दिन काम गर्नुहुन्छ, त्यसै दिनको परिणाम हेर्नुहोस्, कति चाँडै सकिन्छ । यस्ता सामाजिक सञ्जालले तपाईंलाई आफ्नै काम गर्नबाट वञ्चित गरिरहेको छ । जसले मानिसको दैनिकी नै बिगारिदिएको छ ।
९. आपूmप्रति अझै विश्वास बढ्छ
सामाजिक सञ्जालमा तपार्इंले गरेका पोस्टमा लाइक गर्ने मानिसका बारेमा अलिकति अनुसन्धान गर्नुभयो भने पनि थाहा हुन्छ कि तपाईंलाई आएको लाइकको भ्यालु कति छ भनेर । तपाईंलाई आएको त्यो लाइक वास्तवमै मन पराएर आएको होइन । त्यो लाइक गर्ने मानिसले ‘म पनि यतै छु’ भनेर देखाउन जुनसुकै पोस्टमा पनि लाइक गरिरहेका हुन्छ । अब आफँै भन्नुहोस् के तपाईं यस्तै चाहनुहुन्छ यस्तो सम्बन्ध ?
(रुचि, स्वास्थ्य, ठेगाना, शिक्षालगायत) समेतमा सबैको सहज पहुँच छ । जसका कारण तपार्इंले चिन्दैनचिनेका मानिसले समेत ट्याग गरिररहेका छन् । यिनै जानकारीका आधारमा तपार्इंलाई कसैले प्रयोग गरिरहेको हुन्छ । यसकारण यस्ता माध्यमबाट टाढै रहन विज्ञहरूको सल्लाह छ ।
फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा खेर फालिरहेको समय बचत हुन्छ त्यसवेला, जब तपाईंको ध्यान उत्पादनमूलक काममा जान्छ । वर्षाँैदेखि गर्न खोजेको, तर नसकेका कामसमेत पूरा हुन थाल्छन् । यसका लागि तपार्इंको डिभाइसमा भएका सबै सामाजिक सञ्जालका खाताहरू पहिला हटाउनुपर्छ र आफूलाई मन पर्ने अतिरिक्त क्रियाकलापमा ध्यान दिनुपर्छ । जसले ‘फेसबुक प्रयोग’जस्तो कुलतबाट मुक्ति दिन्छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगले धेरैको मस्तिष्क ‘मृत’ बनिसकेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । सामाजिक सञ्जालमा गरिने पोस्टिङ, चेकिङ, ट्यागिङमा तपार्इंसँग भएको मस्तिष्कको एक अंश पनि प्रयोग हुँदैन । यसकारण, आफूसँग भएको क्षमता प्रयोग गर्न तत्काल फेसबुक खाता हटाउन विज्ञहरू सुझाब दिन्छन् । जीवन छोटो छ यसलाई वास्तविक रूपमा प्रयोग गरौँ । फेसबुकको
१. सामाजिक सञ्जालका लागि हामी केही होइनौँ, मात्रै तथ्यांक हाँै भन्ने ज्ञान हुन्छ
वास्तविक जीवनमा हामी सबै एक–अर्काका लागि निकै महŒवपूर्ण छौँ । घरपरिवार, छरछिमेक, साथीसंगति हरेक स्थानमा हाम्रो मूल्य छ । तर, दिनभर अल्मलिने सामाजिक सञ्जालका लागि हाम्रो कुनै मूल्य छैन । उसका लागि हामी मात्र तथ्यांक हौँ । तपाईंसँग संकलन गरेका हरेक व्यक्तिगत सूचनालाई आधार मानेर उसले व्यापार गरिरहेको हुन्छ । तपार्इंले दिएको रुचिका बारे सूचनाका आधारमा फेसबुकले विज्ञापन दिने गर्छ । तपाईंको उमेरअनुसार विज्ञापन हेर्न बाध्य पार्छ । पटक¬–पटक एउटै खेल र विज्ञापन दिएर दिक्क बनाइ राख्छ । किनकि हामी उनीहरूका लागि आम्दानीका स्रोत हाँै । यसकारण, तपाईं स्वतन्त्र व्यक्ति हो, तपार्इं कुनै नम्बर होइन । तत्काल स्वतन्त्र बन्नुहोस् । एजेन्सि